6 ciyaarood oo fiidiyoow ah oo ka dhan ah isbedelka cimilada | Saadaasha Shabakadda
Maanta waxaan heli karnaa dhowr filim, buugaag iyo dokumentiyo ku saabsan isbeddelka cimilada, taas oo mahad leh taas oo aan ku baran doonno kuna fahmi doonno waxa ay ka kooban tahay, iyo sidoo kale sababaha asal ahaan ka soo jeeda. Laakiin marka lagu daro, waxaan sidoo kale leenahay videogames taasi waxay noo oggolaan doontaa inaan helno waqti wanaagsan inta aan bilaabayno biimaynnada aan caadiga ahayn si aan u badbaadino meeraha.
Ma jeclaan laheyd inaad ogaato kuwan ay yihiin?
1 Hoos udhaca
2 Loolanka Cimilada
3 Qorshee Cagaar
4 Weerarkii Gaas
Tani waa ciyaar bilaash ah oo ay dhiirrigelisay ka faa'iideysiga badmaaxiinta 'Basque' Kepa Acero, waxayna bilaabmaysaa marka ay doontiisu ku dhacdo buur baraf ah. Waa inaad caawisaa xalli xujooyinka markaa waxaad dib uheli kartaa doontaada inta aad ogaanaysid sida cirifka Waqooyiga uu durba ujiifa cawaaqib xumada cimilada adduunka.
Waxaa loo heli karaa dhammaan barnaamijyada moobiilka.
Ciyaar kale oo bilaash ah, oo ay soo diyaarisay BBC-da Ingiriiska, taas oo aad ku noqon karto madaxweyne khayaali ah oo ka tirsan quruumaha Yurub. Himiladaadu waxay noqon doontaa dejiso dhaqaale ka cagaaran oo daryeel badan intaad caan ku ahayd. Intaas waxaa sii dheer, waa inaad ku qancisaa waddamada kale inay xakameeyaan qiiqa kaarboon dioxide-ka ay sii daayaan. Ma heli kartaa?
Ciyaartan bilaashka ah ee ay soo saartay National Geographic ayaa kugu martiqaadeysa naqshadee magaalo cagaaran, cilmiga deegaanka, maaraynta ilaha si meeraha uusan u wasakheyn. Intaas waxaa sii dheer, waxaad u baahan doontaa inaad abuurto shaqooyin cagaaran oo aad qorsheyso magaalooyin.
Ciyaarta fiidiyowga ee bilaashka ah ee ka dhanka ah isbeddelka cimilada ee NASA, oo ay qasab kugu tahay yaree qiiqa gaaska lagu sii daayo si looga badbaado aafada.
Qaabka "Comecocos" Waxaa soo saaray Carbon Market Watch iyo Pixel Imact intii lagu jiray 2015. Waa inaad cuno gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo shaashadda kombiyuutarkaaga ama mobilkaaga. Sidoo kale waa lacag la’aan.
Ciyaartan fiidiyowga ee bilaashka ah waxaa soo diyaariyay Tekit. Waxaad u baahan doontaa wax ka beddelo qaabka wax soo saarka, caadooyinka caadooyinka, iyo waliba hawlo kale oo wasakhaynaya meeraha.
Ma ogtahay ciyaaro kale oo fiidiyow ah oo ka dhan ah isbedelka cimilada?
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Isbedelka Cimilada » 6 ciyaar fiidiyow ah oo ka dhan ah isbedelka cimilada